अन्तरवार्ता - Pahilo News
तपाईं पार्टी अनुशासनमा अत्यन्त सचेत हुनुहुन्छ, सँगसँगै सरकारको कामप्रति पनि उत्तिकै चासो राख्नुहुन्छ, सरकारको सफलतालाई कसरी हेर्नुभएको छ ? हामीले तात्कालिक दुई पार्टीको बीचमा एकता गरेर एकीकृत पार्टी निर्माण गरेका छौँ । राजनीतिक रूपमा हामीले ठूलो परिवर्तन गरेका छौँ । संविधानबाटै यसलाई संस्थागत ग¥यौँ । नयाँ संविधानले लोकतन्त्रलाई ..
तीन तह सरकारको अभ्यासमा हामी छौँ, सरकारबीच समन्वय अभाव भयो कि भन्ने टिप्पणी छ । यहाँले कसर..
० लामो रस्काकस्सीपछि अधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरुको जिम्मेवारी तोकिएको छ, कस्तो लागेको छ तपा..
गोकुल बाँस्कोटा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विगतमा तपाईंं आफैँ पत्रकार हुनुुहु..
हामी बाह्रौ गणतन्त्र दिवसको उत्सवमा छौं । गणतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली नागरिक र प्रेसको..
० पछिल्लोपटक महाभूकम्प गएको यही वैशाख १२ गते चार वर्ष पुरा हुँदै छ । भूकम्पपीडितमध्ये केही अझै पालमै छन् । पुनर्निर्माणमा भएको कामको गतिबाट तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक ढंगले नै अगाडि बढिरहेको छ । निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सबैभन्दा महŒवको काम हो । त्यसमा पीडितमध्ये ५० प्रतिशतले घर निर्माण सम..
० न्याय परिषद्बाट पछिल्लो चरणमा भएको न्यायाधीशहरूको सिफारिसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? दामोदरप्रसाद शर्माको पालादेखि व्यक्तिगत भागबन्डा, राजनीतिक झुकाव इत्यादिका आधारमा नियुक्ति हुने जुन प्रचलन बस्यो, अहिले त्यसैको निरन्तरता हो । २०६२–६३ मा जब बहालवाला प्रधानन्यायाधीश कार्यकारी प्रमुख बन्न पुगे त्यसपछि दामोदर शर्मा कामु प्रधानन्याया..
० भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनको समिक्षा कसरी गर्नुभएको छ ? सम्मेलन भनेको वाश्तवमा विभिन्न व्यत्तित्वहरुको जमघट हो । अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रका ७ सय ३५ भन्दा बढी व्यक्तिहरु यो सम्मेलनमा सहभागी भएको भन्ने छ । अन्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरु विश्व वैंक, एशीयाली विकास बैंक, अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम लगायत नाम चलेका संस्थाका प्रतिनिधीहर..
० पछिल्लो समय सरकारले नेकपाको विप्लप समूहलाई लगाएको प्रतिबन्धलाई कुन रूपमा हेर्नुभएको छ ? राजनीतिक अन्तरविरोध प्रतिबन्धसम्म पुग्नुनपर्ने हो । त्यस्तो कदमले फाइदा सरकारलाई भन्दा विप्लव समूहलाई नै बढी हुन्छ जस्तो लाग्छ । किनकि जो खालको मूल्यांकन गरिनुपर्ने हो, त्यही खालको नै मूल्यांकन गरिनुपर्छ । मूल्यांकनमा अति गरियो भने त्यसको प..
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया जारी छ । तर, ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकताको घोषणा हुदै गर्दा जुन कार्यतालिका बनाइएको थियो । त्यो अनुरुप हुन सकेको छैन । पार्टी कमिटि अहिले चलायमान छैन । नेता तथा कार्यकर्ताहरु विजनेशविहिन भएका छन् । नेकपाको सरकार छ । तर, जनअपेक्षा अनुरुप काम नभएको भन्दै आलोचना सुरु […]
० संसदमा तपाईको प्रस्तुति सुनेर मान्छेले तपाँइ सत्तापक्षको सांसद हो कि प्रतिपक्षको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गर्छन नि ? म सत्ता पक्षको सांसद हुँ नी । सत्ता पक्षको भन्दा पनि अझ झन् पार्टीलाई सबैभन्दा बढी माया गर्ने मान्छे । ० तर अहिले प्रतिपक्षी सांसदहरु बरु चुप लागेर बसेको बेला तपाँइको प्रस्तुती हेर्दा त प्रतिपक्षको जस्तो भुमिका [&he..
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भई विभिन्न तहको निर्वाचन भइसकेपछि विकास र समृद्धिको लक्ष्यसहित नयाँ सरकार गठन भएको आजै सात महीना पुगेको छ । लामो समयको सङ्घर्षबाट जनताले प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सुशासन र विकासका जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीको विषय रहिआएको छ । यिनै चुनौतीक..
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठनपछि एकीकरणको बेलामा जस्तो उत्साह अहिले छैन र जनसंगठन तथा विभिन्न कमिटी समायोजनका काम पनि सुस्त गतिमा भइरहेको देखिन्छ नि, किन होला ? – पहिलो कुरा त तपाईंको प्रश्न नै म सच्याउन चाहन्छु । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन अहिले भएको होइन । अहिले त पुनर्गठन पनि होइन, नेकपाका दुईवटा प्रमुख घटकहरूका बीचमा [&he..
० महिलाको बलात्कारपछि हत्या, त्यसपछिको आन्दोलन र एक जनाको मृत्यु, पछिल्लो समयमा कञ्चनपुरका यी सबै घटनाक्रमलाई कसरी लिनुभएको छ ? – कञ्चनपुरमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्या एकदमै निन्दनीय छ । हामीले त्यसको भत्र्सना गरेका छौं । त्यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न कुनै व्यक्तिले कुनै प्रकारको छुट पाउनुहुँदैन । कडा कानुनी कारबाही गर..
० पछिल्लो समयमा खासगरी निजामती कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको बीचको टकरावले काममा समस्या उत्पन्न हुने गरेको कुरा बाहिर आएको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ? – राजनीति र प्रशासन दुईवटा अलगअलग धार हुन्, तर एउटै मिसनका लागि दौडिएका तŒव हुन् । मिसन त राजनीतिक व्यक्तित्वले नै तय गर्ने हो । उनीहरूले दिएको विधि […]
देशकै सबैभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर । त्यही सानो जिल्लाको आधाभन्दा बढि भौगलिक हिस्सा ओगट्ने चाँगुनारायण नगरपालिकाका मेयर सोम मिश्र नेकपा भक्तपुरका पुराना चर्चित नेता हुन् । तत्कालीन एमाले भक्तपुरका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका मिश्र चागुनारायणबाट विकासको नयाँ मोडल संचारित गर्नेगरी अहोरात्र खटिएका छन् । उनले व्यवसायी र उद्यमीबाहेक जनता..
औषधि व्यबस्था विभागले पीडा नबुझ्दा व्यबसाय धराशायी हुने स्थितिमा पुग्यो
नेपालमा आयुर्वेद चिकित्सा सेवाप्रति आकर्षण बढ्दो छ । एलोपेथिक औषधिबाट निको नभएका थुप्रै रोग आयुर्वेदिक चिकित्सा उपचार र आयुर्वेद औषधिबाट हुने गरेको उदाहरणले पनि यसप्रति जनविश्वास बढ्दै गएको छ । राज्यको कम प्राथमिकताका बाबजुद यस क्षेत्रमा पनि चिकित्सक उत्पादन बढ्दै गएको छ भने व्यबसायीहरु पनि थपिदैंछन् । तर, पछिल्ला दिनमा व्यबसायी..
वकिलले संविधानमा भएको कुरा बोल्ने कि राजनीति गर्ने ? डा.युवराज संग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता
० प्रधानन्यायधिसमा सिफारिस कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको प्रकरणलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? – यसलाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ । हाम्रो संविधानको धारा १३३ मा संसद्ले बनाएका कानुनहरूलाई घोषणा गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । संविधानको धारा २९२ मा न्यायाधीश तथा ..
आवश्यकता अनुसार मन्त्रीमण्डल फेरबदल हुनसक्छ : नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता नेकपा
० दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता त भयो तर त्यसयताका गतिवधीहरु त्यती सन्तोषजनक ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन भन्ने गुनासो छ नि ? नेपाली समाज र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकता अनुसार हामीले पार्टी एकताको पहल गरेका हौं र सोही अनुसार पार्टी एकता गरिएको हो । पार्टी एकता गरिसकेपछि सैद्धान्तीक–वैचारिक रुपमा सहि दिश..
मनमोहन अस्पतालाई राष्ट्रियकरण गर्न नदिने पनि गोविन्द केसी नै हुन्: डा.वंशिघर मिश्र, पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य, नेकपा
० डा.गोबिन्द केसीको अनसनलाई तपाँइले यसलाई कुन रुपमा लिनुभएको छ ? गोविन्द केसीको अनसन अहिले विलकुल आवश्यकता नभएको र औचित्यहिन, पुरै आग्रह र हठपुर्ण अवस्थाको अनसन हो । उहाँले १५ औं अनसन गरिहनुपर्ने कुनै आवश्यकता थिएन । चिकित्सा क्षेत्रको शिक्षामा सुधार ल्याउने उहाँको यदी मनसाय हो भने प्रसस्त सुधारहरु भएका छन् । ० तर तपाँइले [&hell..
गोविन्द केसीका नाममा लोकतन्त्रलाई नै मार्ने ? सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री तथा स्थायी समिति सदस्य, नेकपा
० पार्टी एकता भएको लामो समय भएपनि त्यसयता गर्नुपर्ने कामहरुले किन गति लिन सकेन ? एकता पछि विधान र नियमावली पारीत गरिसकियो । अब त्यो छपाइको चरणमा छ । संभवत केही दिन पछाडि छापिएर आँउछ । पार्टीका तल्ला कमिटीहरु र जनवर्गिय संगठनहरुको एकताको प्रत्रिक्रया चाँही जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, त्यसरी भइरहेको छैन । तर अस्ति […]
सरकार गठन हुँदा जुन उत्साह र अपेक्षा थियो, त्यसअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो बढ्न थालेको छ नि ? के सरकारले काममा गति पक्रन नसकेकै हो ? यो हल्ला मात्रै हो । केही तत्वहरु यो सरकार असफल भएको हेर्न चाहन्छन् । ति तत्वहरुले चलाएको हल्ला र उनीहरुको डिजाइन हो । अनि त्यो भित्रको केही मिडीयाबाजीले पनि […]
सरकारले आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता कति वृद्धि गर्ला ? निजामति–कर्मचारीदेखि सेना–प्रहरीमा बढी चासो छ । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन लगायतका बिभिन्न कर्मचारी संघ–संगठनले सरकारी कर्मचारीले हातमुख जोड्न सक्ने तलबभत्ता हुनेगरी वृद्धिको माग गर्दै आएका छन । सरकारी कर्मचारीको ..
टुट–फूटको अतित बिर्सिदैं यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा राजनीतिक दलहरुबीच एकताको महोल छ । एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको एकता लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यद्यपि, अन्य राजनीतिक दलहरुले पनि चुनावमा पराजित हुनुको मुख्य कारण पार्टी विभाजन र गुटबन्दीलाई कारक मानेर एकता प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन् । बिभाजित तीन राप्रपा पनि एकताका लागि ..